Figures uye Graphics
Figures uye Graphics - nguva dzose anokwezva mhinduro nokuda kushongedzwa promotional zvinhu, mukati, uyewo hwaro basa chero mifananidzo. Figures kungadiwa kwete chete somunhu chinhu yakarongedzwa: dzimwe nguva vadzidzi iwe-zvakajeka mano vanoda rubatsiro nenyanzvi, uyo achaita kwavari kana kuchinja mufanidzo, kana unhu waivako haisi nguva yakakwana, kana nyaya haakonzeri femero. Ini unogona kuti mifananidzo Graphics yepamusoro: Ndinoshanda zvakasiyana-siyana siyana, nedzimwe zvinhu, saka kunyange yakawandirwa mutengi achagutswa pamwe.
Pfungwa nokuti connoisseurs
Graphics patani mukuita wangu harisi chete gadzira pamusoro makadhibhokisi, raanoziva bepa kana Watercolour. Ndinoshanda as a kombiyuta Graphics, saka ndinogona arayire:
• muenzaniso patani kambani logo;
• nyora gadzira;
• chinhu mukati kupenda;
• basa mudzidzi;
• dzinovaraidza mufananidzo;
• asian etc..
Ndiri emhizha pamwe rakakura ruzivo, vanhu, uyo opedza maawa daily kuvandudza unyanzvi hwavo. Ndinoziva dzakasiyana uye tichiswedera unyanzvi, kushanda pahwendefa hwakajeka uye 'tradition' nezvinhu - kanivhasi, bepa, etc.. Unogona kuva nechokwadi, kuti basa rangu uchasangana zvose zvaunoda uye zvinodiwa, tarisa nemachira fadza. Kubudisa kana Graphics huchagadzirisa zvose mabasa ake: Kana Logo ichi, ipapo Achashanda pamusoro kuziva kwako mabhizimisi uye kugadzirisa zvimwe zvinetso bhizimisi, kana iwe rayirai mifananidzo sechipo - chichavapo kufadza uye ndezvokuti Kuwedzera, ndiani prepodneson. basa rangu zvinobudirira akatarira ari mukati, uye mudzidzi vanodhirowa nguva dzose vanoongwa, sezvo ivo kutevedza zvinodiwa, zvavakatemwa nevadzidzisi.
High yepamusoro uye kunyatsoshanda kuti aurayiwe mabasa chero kunzwisisa, kuita mavambo, kusikwa oga mabasa maererano nezvido zvako - ndizvo chinosiyanisa basa rangu kubva vaitaura nezvimwe Artists uye vagadziri.
Ini ndakagadzirira kuuraya chero murayiro! kugadzirisa, musakanganwa:
• Kana uchida kuva kombiyuta Graphics, ipapo vakasarudzwa zvinhu, izvo zvaungada kuona basa (kabhodhi, kanivhasi, kraft; mufananidzo zvechinguvana, mu penzura, gel matanga, ingi, etc.);
• zvose zvinodiwa kuti mufananidzo, Somuenzaniso, zvandinenge Style, omerera akadzama, etc..
basa rangu - nguva dzose ari quintessence kuti professionalism, symbiosis waro okugadzira zvinhu, saka vanodhirowa uye Graphics - hazvisi chete kushongedzwa mukati, asiwo kunobatsira kuti purofiti, kana iwe kuzvishandisa zvebhizimisi zvinangwa!